ကွန်မြူနစ်ဝါဒီများ အသေမသတ်နိုင်သောဘုရားကို သင်ဖူးမြင်နိုင်ပါသည်။ | You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him! | Real Conversion
၂၀၁၂၊ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ရက်၊
“တဖန် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်တို့သည် ငါ့ကိုခေါ်၍ သွားလာကြလိမ့်မည်။ ဆုတောင်းသောအခါ သင်တို့စကားကို ငါနားထောင်မည်။ ငါ့ကိုရှာသောအခါ စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့နှင့်ရှာလျှင် တွေ့ကြလိမ့်မည်။” (ယေရမိ ၂၉း၁၂-၁၃)
ထာ၀ရဘုရားက သူ၏လူတို့ကို ပရောဖက်အားဖြင့် စကားနှစ်ခွန်းကို မိန့်တော်မူ ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မောရှေကိုလည်း မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။
“သို့သော်လည်း ထိုအရပ်တို့၌ သင်၏ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရားကို တဖန်ရှာလို သောအခါ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့်ရှာလျှင် တွေ့ရကြလိမ့်မည်။” (တရားဟော ၄း၂၉)
ဒါဝိတ်မင်းကြီးကလည်း “ကိုယ်တော်ကိုရှာလျှင် အတွေ့ခံတော်မူမည်”ဟူ၍ မိန့် တော်မူခဲ့ပါသည်။
Þဤကျမ်းပိုဒ်သုံးပိုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့အား ထာ၀ရဘုရားကို ကြိုးစား၍ ရှာဖွေခိုင်းပါသည်။ ထိုသို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်၌သာ ကိုယ်တော်၏ကတိတော် တည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်က ညာဏ်စွမ်းရှိသမျှဖြင့် ကိုယ်တော်ကို ရှာဖွေမှသာလျှင် ကိုယ်တော်၏ ကတိတော်င်၌ ပြည့်စုံမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အတွေးအမြင်ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတော်၌ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရပါသည်။ သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောလျှက်ရှိ၏။ လူအများ တို့သည်လည်း နိုင်ငံတော်ကို အနိုင်အထက်ဝင်ကြ၏။” (လုကာ ၁၆း၁၆)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ယေရှု မိန့်တော်မူသည်မှာ သင်သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ အနိုင်အထက် ကြိုးစားဝင်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဂရိမူရင်းစကား ကိုကြည့်သော် “အနိုင်အထက်တိုးဝင်ခြင်း”၊ “တိုးဝှေ့ပြီး ဘုရားမျက်မှောက်တော်ကို ရှာခြင်း” ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ၎င်းကို ရှင်းလင်းအောင် ခရစ်တော်ဘုရားက မိန့်တော်မူသည်မှာ “ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့” (လုကာ ၁၃း၂၄)ဟု မိန့်တော်မူပါ သည်။ ဂရိမူရင်းဘာသာစကားဖြင့် အပတ်တကုတ် ကြိုးစားခြင်းကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ခုခံတိုက်ခိုက်သည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ ဂရိဘာသာစကားအရ ဟူ၍ ရေးသားထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်္ဂလိပ်လို ပြင်းထန်သော ဝေဒနာကို ဂရိဘာသာစကားမှ ယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုဘုရားက သားတော်နှင့် ခမည်းတော် ဘုရားသခင်ကို သင်တွေ့လိုသောငှါ ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီး ရှာဖွေရမည်ဟူ၍ မိန့်တော် မူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ငါ့ကိုရှာသောအခါ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့်ရှာလျှင် တွေ့ကြလိမ့်မည်” (ယေရမိ ၂၉း၁၃)
အနည်းငယ်သော အမေရိကန်နိုင်ငံသားတို့နှင့် ဥရောပတိုက်သားတို့ကသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို အမှန်သိရှိကြသည်။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို “ညာဏ်စွမ်းရှိသမျှ” ဟသူတို့] မရှာဖွေကြပါ။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ခရစ်တော်ဘုရားကို ကြိုးစားပြီး မရှာဖွေကြပါ။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသားတို့နှင့် ဥရောပတိုက်သားတို့ အများစု သည် ဘုရားသခင်ကို မရှင်းမလင်းဖြစ်နေကြသည်။ ထိုသူတို့က ဘုရားသခင်ကို မသိကြပေ။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို သဘောတရားလောက်သာသိရကြပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ခြင်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မရှိကြပေ။ ယနေ့ အနောက်နိုင်ငံသားတို့ ဘုရားသခင် အမှန်တကယ်တည်ရှိကြောင်းကို မယုံကြည်ကြပါ။ အနည်းငယ်သော အမေရိကန် နိုင်ငံသားတို့နှင့် ဥရောပတိုက်သားတို့သည် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်ကို သိနားလည် ကြပါသည်။ ထိုသူတို့၏ဘုရားသည် သဘောတရား တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ အချို့တို့အတွက်ကား ဘုရားသခင်ကို သဘောတရားလောက် နားလည်ခြင်း ကိုပင် မလိုလားကြပေ။ အများသောသူတို့သည် ဘုရားသခင် အုပ်စိုးတော်မူသည်ကို လက်မခံကြပေ။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းလေးဆယ်တုန်းက ဆန့်ကျင်မှု ဖြစ်ပေါ်လာကတည်းက အမေရိကန်လူအများတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်ကြတော့ပေ။ ယနေ့မျက်မှောက်ကာလတွင် ထိုသူတို့၏ဝိညာဉ်သည် လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေသဖြင့် ဘုရားသခင်ကို မရှာဖွေလိုတော့ပါ။ ထိုသူတို့သည် ဟသူတို့၏] စိတ်နှလုံးသား ညာဏ်စွမ်းရှိသမျှနှင့် ဟဘုရားသခင်] ကို မရှာဖွေလိုတော့ပါ။ “ ထိုသူတို့က ဇိမ်ခံမှုမရှိသောနည်းလမ်းဖြင့် ဘုရားသခင်ကို မရှာဖွေလိုတော့ပါ။ ထိုသူတို့က ခရစ်တော်ဘုရားသခင်နှင့် တွေ့လိုသောငှါ “ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး” မရှာဖွေ ကြပါ။ ၎င်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသားနှင့် ဥရောပတိုက်သားတို့၏ ကြီးလေးသော ပြဿနာတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။
“ဟထိုသူတို့]သည် စိတ်နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ဖြင့် ဟဘုရားသခင်] ကိုရှာဖွေနေမည့်အစား သွေးစွန်းရုပ်ရှင်များ၊ ဆေးခြောက်သုံးစွဲရုပ်ရှင်များ၊ သို့တည်းမဟုတ် ဗီဒီယိုဂိမ်းကို အချိန်ကုန်ခံကာ ကစားနေကြသည်။
အမေရိကန်ဖွား တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပြောကြားသည်မှာ “ဝေယျာဝစ္စများပြီး ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်” ဟူ၍ ပြောခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်ဖွား တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦး ကတော့ “လုပ်ဆောင်စရာများလွန်းသည်ဟုပြောကာ ဘုရားကျောင်းမှထွက်သွားပြီး ဗီဒီယိုဂိမ်းဘဲ ဆော့ကစားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အမေရိကန်လူငယ်များ ဝိညာဉ်ရေး၌ အပျင်းထူနေ ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အချို့သောပြောင်းလဲလာသူခရစ်ယာန်များက ဘုရားသခင်ကို ကြိုးစားပြီး ရှာဖွေ ရတာ အမှားတစ်ခုပဲဟူ၍ တွေးထင်နေသူအချို့ရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ်သိနားလည်ပါသည်။ ထိုသို့ ကျွန်ုပ်ပြောသည်ကို ကျွန်ုပ်အား အပြစ်ရှာမည်ဆိုလျှင် ထိုသူတို့သည် ဖိလိပ္ပိ အခန်းကြီး ၂ အငယ် ၁၂-၁၃ ကို မေ့လျော့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ
“မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား သင်တို့သည် အလိုရှိစေခြင်းငှါ၎င်း၊ အကျင့်ကျင့်စေ ခြင်းငှါ၎င်း၊ သင်တို့အထဲ၌ စေတနာအားဖြင့် ပြုပြင်တော်မူသောသူကား ဘုရားသခင်ပေတည်း” (ဖိလိပ္ပိ ၂း၁၂-၁၃)။
အကယ်၍ ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၌ ကယ်တင်ခြင်းအဖို့ ကြိုးစားအား ထုတ်မည်ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်က သင့်အား နှိုးဆော်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ “ငါ့ကိုရှာသော အခါ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့်ရှာလျှင် တွေ့ကြလိမ့်မည်။”(ယေရမိ ၂၉း၁၃) ၁၈၂၅-၁၉၀၉ ခုနှစ်၊ အလယ်ဘတ်မတ်လင်း
(အာလ်လဘတ်မတ်လင်း သီကုံးသော “အမှုတော်အတွက် နိုးထစေပေါ”)
“ဝိညာဉ်ဆာငတ်သောသူ” ကိုသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို အတွေ့ခံစေပါသည်။ ထိုသို့ ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါလျှင် သင်သည်လည်း သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော်မူသကဲ့သို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား လူငယ်မောင်မယ်များပမာ ဝိညာဉ်အပျင်းထူနေ မည်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“နားလည်သောသူမရှိ၊ ဘုရားသခင်ကို ရှာသောသူမရှိ” (ရောမ ၃း၁၁)
အကယ်၍သင်သည်လည်း ဘုရားသခင်ကို ဖူးမြင်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိပါလျှင် “ဝိညာဉ် ဆာငတ်” မှုကို ဘုရားသခင် သင့်နှလုံးသားထဲ ထည့်သွင်းပေးတော်မူမည်။ အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့မဖြစ်လို ဘုရားသခင်အတူမပါပဲ သေလိုပါလျှင် သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ မိန့်တော် မူထားသည်မှာ “မျှော်လင့်ခြင်းမရှိ၊ လောက၌ဘုရားမဲ့နေကြသည်ကို၎င်း၊ အောက်မေ့ကြ လော့”ဟူ၍ (ဧဖက် ၂း၁၂)၌ မိန့်တော်မူပါသည်။
“မျှော်လင့်ခြင်းမရှိ၊ လောက၌ ဘုရားမဲ့နေကြခြင်း”သည် ကြောက်ရွံဖွယ် မဟုတ် ပါလားဍ မျှော်လင့်ရာမရှိဘဲ အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် သေခြင်းလောက်ကြောက်ရွံဖွယ် မရှိတော့ ပါ။ ဘုရားသခင် အတူမပါရှိဘဲ မျှော်လင့်စရာမရှိခြင်းက အဘယ်သို့နည်း။ ဘုရားသခင်အတူ မပါရှိခြင်းက သေခြင်းကို စောင့်မျှော်နေခြင်း သက်သက်ဖြစ်၏။ မျှော်လင့်စရာမရှိပါ။ အကြောင်းမှာ သေပြီးဘာမှ အကျိုးဆက်မရှိတော့ပါဟူသော သနားစရာ အတွေးအခေါ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သနားစရာ ဘုရားမဲ့လူသားသည် သေမိန့် ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသော အကျဉ်းသားပမာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားမဲ့လူသားတို့သည် ရာဇဝတ် သားပမာ အစောင့်တပ်သားတို့၏ ခေါ်ထုတ်ပြီး မီးရှို့အသေခံရန် စောင့်နေသည့်သူကဲ့သို့ မျှော်လင့်ရာ ဘာတစ်ခုမျှမရှိပါ။ဍ
ကွန်မြူနစ်ဝါဒီတို့၏ ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်တို့သည် ခရစ်ယာန်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလ်မတ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ဘာသာရေး ဟူသည် လူတို့အား မူးယစ်မေ့မျော့စေခြင်းဖြစ်၏။” ယောဆမ်စတေလင်က လူသန်းပေါင်း ၂၀ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ထောင်ချီသောခရစ်ယာန်တို့အား ထောင်ထဲ သွင်းချခဲ့ပါသည်။ မော်စီတုန်းက ထိုထက်များစွာသောလူတို့ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ခြောက်ဆယ်လေးသန်းခန့်သော တရုတ်လူမျိုးကို မော်စီတုန်းက အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ထောင်ချီသောခရစ်ယာန်တို့ကို အနုနည်းဖြင့် ထောင်ထဲသွင်းချ အသေသတ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအရာများသည် အနောက်နိုင်ငံ၌ သတင်းပြန့်နှံ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒီတို့က နိုင်ငံပိုင်အစိုးရကျောင်းများကို တည်ထောင်ခဲ့ကြပြီး ကျောင်းသားလူငယ်မောင်မယ်တို့အား မော်စီတုန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံကို ကမ္ဘာကျော်ကြား အောင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ဟု ရိုက်သွင်းထားပါသည်။ အကယ်၍ တရုတ်နိုင်ငံအား ရှိန်းခိုင်ရှက်ကဲ့သို့ ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ၎င်း ဦးဆောင်မည်ဆိုလျှင် မည်သို့မည်ပုံပြောင်းလဲတိုးတက်လာနိုင်မည်ကို မည်သို့သိနိုင် မည်နည်း၊ ဘုရားသခင်နှင့် ခရစ်တော်ဘုရားကို တရုတ်လူမျိုးတို့ သက်ဝင် ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ထိုသူတို့အား မော်စီတုန်းက ထောင်ထဲအနှစ်နှစ်ဆယ် ကျခံစေ ခဲ့ပါသည်။ ပေကျင်းမြို့တော် အနီးတဝိုက် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဝေငှသော သင်းအုပ် ဆရာ ကျွန်ုပ်၏အခန်းဖော်လည်း ထောင်ထဲဆယ်နှစ် ကျခံခဲ့ဖူးသည်ကို ကျွန်ုပ်သိခဲ့ ပါသည်။ သို့တိုင်အောင် လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ဆယ်ကတည်းက ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါသည်။ ခန့်မှန်းခြေအရ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန် များ သန်းပေါင်း ၁၂၀ ခန့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး။ အများစုတို့သည် မြေအောက်လှုပ်ရှားမှု အိမ်အသင်းတော်မှ ပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်နာရီလျှင် လူပေါင်း ၇၀၀ခန့် နေ့နေ့ညည ယနေ့တရုတ်နိုင်ငံ၌ ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲနေကြပါသည်။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းတို့က အိမ်အသင်းတော်ကြောင့် လျှင်မြန်စွာခရစ်ယာန် ဖြစ်လာကြသည်ကို ဖျက်ချရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်စာကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ရပါသည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒီတို့က နလနညါနူငခal အသင်းသားတို့အား “မကောင်းဆိုးဝါးအယူ”ဟူ၍ ခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ အဘယ်မျှလောက် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသနည်းဍ အဘယ်မျှလောက် မျက်စိကန်းနေကြသနည်း။ဍ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဘုရားသခင်မရှိဟူ၍ ကောလိပ်ကျောင်းများတို့၌ သင်ကြား နေသည်ကို ကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ဤတိုင်းပြည်၌လည်း ထူးခြားခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၌ ရှိသောလူငယ်မောင်မယ်တို့အားလည်း ကောလိပ်ကျောင်းများ၌ ဘုရားသခင်နှင့် သမ္မာ ကျမ်းစာကို ဆန့်ကျင်ရန်သွန်သင်နေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာတို့က လူငယ်တို့အား ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာကြဖို့ မတားဆီးနိုင်ပါဍ သူတို့၏ကျောင်းဆရာတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာ မျက်စိကန်းနေကြသည်ကို လူငယ်များသိနေပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၌ ထောင်ပေါင်းများစွာ သောလူငယ်တို့က ကျောင်း၌သင်ကြားပေးသော ၎င်းတို့၏ဆရာများတို့သည် မှားယွင်းစွာ သင်ကြားနေကြသည်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါသည်။
ဒေးဝိဒ်အေးမန်သည် အနှစ်နှစ်ဆယ်တိုင်တိုင် ပေးကျင်းမြို့နှင့် အရှေ့တောင် အာရှ၏တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းသတင်းထောက် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ (Regnery Publishing, Inc., 2003) Jesus in Beijing ဟူသော ထိုဆရာရေးသားသောစာအုပ်ကို တရုတ်လူငယ် မောင်မယ်တို့ ဖတ်စေလိုပါသည်။ ထိုသူ၏စာအုပ်အဆုံးနိဂုံး၌ မစ္စတာအေးမန် ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဏမသအနျအညေအ ခရစ်ယာန်များ ပြောင်းလဲနှုန်း အမြင့်မားဆုံးဖြစ်သည်ဟု ရေးသားထားပါသည်။ အနောက်နိုင်ငံ၏ ခရစ်ယာန်နိုးထမှု သည် တရုတ်နိုင်ငံဘက်ဆီသို့ ရွေ့လျားနေပြီဖြစ်သောကြောင့် နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုနှစ်သည် တရုတ်ရာစုနှစ်ဟူ၍ပင် ဖြစ်လာမည်ဟူ၍ အကြံပြုထားပါသည်။ ထိုသို့ ပေါက်ကွဲ ကြီးထွားလာရခြင်းကား သစ္စာရှိသောခရစ်ယာန်တို့အား ကွန်မြူနစ်ဝါဒီတို့၏ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှုနှင့် ထောင်ထဲသို့ အတင်းသွင်းချခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် အန္တရာယ်ကိုမမှု၊ ထောင်ထဲသွင်းချခံရမည်ကို မကြောက်ဘဲ ခရစ်တော်နောက်လိုက်ကြရသနည်း၊ သိက္ခာတော်ရဆရာတော် ဝုန်ဘရမ်း လုပ်သက်ရင့် သင်းအုပ်ဆရာသည် ရိုးမေးနီးယားနိုင်ငံ၌ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဝေငှခြင်းကြောင့် ထောင်ထဲနှစ်ရှည်နေခဲ့ရပါသည်။ Tortured for Christ, ဟူသော ထိုဆရာရေးသားသော အကျဉ်းထောင်ထဲ၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းစာအုပ်ကို ဘာသာစကားပေါင်း ၆၅ ဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုဆရာရေးသားသော စာအုပ်အဆုံးနိဂုံး၌ အောက်ပါအတိုင်း သီကုံးရေးသားခဲ့ပါသည်။
ရုရှားစစ်ဗိုလ်တစ်ဦးက ဟင်ကယ်ရီတွင် ဓမ္မအမှုဆောင်တစ်ဦးကို တိတ်တဆိတ်
တွေ့ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုလူငယ်စစ်ဗိုလ်သည် အောင်နိုင်သူပီပီ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး သတိရှိသူဖြစ်သည်။ အခန်းငယ်ဆီသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီး တံခါး ကိုပိတ်လိုက်ကာ နံရံပေါ်၌ ချိတ်ဆွဲထားသောကားတိုင်အား ခေါင်းညိတ် ကန်တော့ခဲ့သည်။
“ထိုအရာသည် လိမ်ညာနေခြင်းဖြစ်သည်” ဟူ၍ အမှုတော်ဆောင်အား ပြောကြား ခဲ့သည်။ “မင်းတို့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တို့က ဆင်းရဲသားများကို လိမ်ညာပြီး သားတော်ကိုယုံကြည်လျှင် ချမ်းသာလာမည်ဟု လှည့်စားနေကြတယ်၊ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုကို ကျွန်ုပ်မယုံကြည်ပါဘူးဟူ၍ ကျွန်ုပ်ရှေ့မှာ ဝန်ခံစမ်းပါ”
အမှုတော်ဆောင်ဆရာက ပြုံးလျက် “သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာကောင်လေးရယ် ကျွန်ုပ်သိပ်ကိုယုံကြည်တယ် အမှန်တရားတွေပါ။”
ကျွန်ုပ်ကို လိမ်ညာလှည့်စားပြီး မပြောစေလိုပါဍ ဟူ၍ စစ်ဗိုလ်ကဆို၏။ “၎င်းကိစ္စ ကအရေးကြီးသဖြင့် ကျွန်ုပ်ကို မကျီစားပါနှင့်ဟူ၍” စစ်ဗိုလ်က ကြေကွဲစွာ ပြောဆို၏။
စစ်ဗိုလ်က ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကိုထုတ်လျှက် ထိုဆရာအား အနားကပ် ချိန်ရွယ်ခဲ့၏။
“အကယ်၍ ထိုအရာသည် လိမ်ညာတာဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံပါက အသေသတ်ပစ် မည်ဟုမဟုတ်ဟု ဆို၏” “ကျွန်ုပ်ထိုသို့ ဝန်မခံနိုင်ပါ ထိုသို့ဝန်ခံရလောက်အောင် အမှန်တရားမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်အမှန် ဖြစ်သည်” ဟူ၍ အမှုတော်ဆောင်ဆရာက ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုအခါစစ်ဗိုလ်က ခြောက်လုံးပြူးသေနတ်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပစ်ချလိုက်ပြီး ဘုရားသခင်၏လူကို ဖတ်ထားလိုက်၏။ မျက်ရည်မဆည်နိုင်အောင် စီးဆင်းလေ တော့၏။ အမှန်တရားတွေပါဟူ၍ စစ်ဗိုလ်က ဝန်ခံခဲ့၏။ ၎င်းသည် အမှန်တရားပါဟူ၍ ဝန်ခံသည်ဍ
ကျွန်ုပ်လည်း ထိုသို့ ယုံကြည်ခဲ့သူပါ။ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် အသေခံရဲသူ သင့်ကိုတွေ့မှ အမှန်တကယ်ရှင်းလင်းစွာ ကျွန်ုပ်လည်း ယုံကြည်ပါပြီ။ အိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာဍ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းကို ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ယခုဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်လည်း ခရစ်တော်အတွက် အသေခံရဲပါပြီ။ သင်က ကျွန်ုပ်၏ ယုံကြည်ခြင်းကို တကယ်ခွန်အား ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။”။
ထို့နောက် သင်းအုပ်ဆရာဝုန်းဘရမ်းက “ကျွန်ုပ်တို့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒီတွေကို အနိုင်ယူနိုင်ခြင်းအကြောင်းမှာ ပထမ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်၌ ရှိနေ၍ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဒေသနာတော်သည် အမှန်တကယ် တရားကို ဆာငတ်သောသူတို့၏ နှလုံးသားကို ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (Richard Wurmbrand , Th.D., Tortured for Christ , The Voice of the Martyrs, 1998 edition, pp. 113-114).
လူသားတို့၏နှလုံးသားသည် ကြေကွဲလျက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ရာကို ရှာဖွေနေပါသည် ဘုရားမဲ့လူသားတို့သည် ဘယ်တော့မှ အလိုပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာလျှင် သင်၏မျှော်လင့်ရာနှင့် ခွင့်လွှတ်သော အရှင်ဖြစ်သည်။ဍ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သားတော်အား ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီး ကားတိုင်ပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား အသေခံပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး မျှော်လင့်ရာကိုပေးတော်မူရန် ဘုရားသခင်သည် အသေခံတော်မူသော သားတော်ယေရှုအား ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ပြန် ထမြောက်စေခဲ့ပါသည်။
လီနန်သည် သေဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ မော်စကိုမြို့၌ ပြသထားသော သူ၏ ရုပ်ကလပ်ဓါတ်ပုံကို ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်။ မော်စီတုန်းလည်း သေဆုံးခဲ့ပါပြီ။ သူ၏ရုပ်အလောင်း ဓါတ်ပုံကို တိုင်နန်မယ်ဥယျာဉ်တော် မော်စီလုန်၌ ပြသခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် မသေနိုင်ပါ။ ထိုအရှင်သည် ထာ၀ရအသက်ရှင်နေပါသည်။ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းသန်းပေါင်းများစွာသောခရစ်ယာန်တို့၏ နှလုံးသား၌ ကိန်းဝိပ်တော်မူပါသည်။ဍ ခရစ်တော်သည် မသေနိုင်ပါ။ ကောင်းကင်ဘုံအဖ ခမည်းတော်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌ထိုင်နေတော်မူပြီး ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဆုတောင်း နေပါသည်။ဍ
ယနေ့ ကျူးဘား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၌ သန်းနှင့်ချီသော ခရစ်ယာန်များ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အစေကိုခံနေကြပါသည်။ အသေအချာပြောနိုင်သည်မှာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ရှိသော ခရစ်ယာန်တို့လည်း အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ထက် ကွန်မြူနစ်တို့၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ခံနေကြရမည်ဟု ကြော်ငြာနိုင်ပါသည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ ကွန်မြူနစ်တို့က ထိုသူတို့၏ ယေရှုသခင်အပေါ် ယုံကြည်ခြင်းကိုမူကား ဖျက်ဆီး၍ရမည်မဟုတ်ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကွန်မြူနစ်အရာရှိ များ “လျှို့ဝှက်စွာ ခရစ်ယာန်ပြောင်းလဲနေကြသည့် အစီရင်ခံစာကို ဖတ်ကြားခဲ့ရ ပါသည်။ဍ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် ကြေကွဲသောနေသော နှလုံးသားတို့၏ အလိုကို ပြည့်စုံစေပါသည်။ ဘုရားမဲ့ကွန်မြူနစ်ဝါဒီတို့၌ ထိုသို့သောခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ရာ ဟူ၍ မရှိနိုင်ပေ။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကို ရပ်တန့်စေလောက်သော တန်ခိုး ကွန်မြူနစ်တို့၌ မရှိပေဍ ယနေ့ မူစလင်နိုင်ငံတို့၌လည်း ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက် နေပြီဖြစ်သည်။ ဂျေရီထရောဒယ်ရေးသားသော Miraculous Movements ဟူသော စာအုပ်ကျွန်ုပ်၌ ရှိပါသည်။ (Thomas Nelson Publishers, 2012) . “ထောင်ပေါင်းများစွာသောမူစလင်များ ယေရှု၏မေတ္တာနှင့်ဆုံကြပြီ” ဟူသော စာသားကို စာအုပ်အဖုံး၌ ရေးသားထားပါသည်။ သန့်ရှင်းသောနာမတော် ချီးမွမ်းခြင်းရှိစေဍ
သင်းအုပ်ဆရာ ဝုန်းဘရန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “]ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့ကို ဧဝံဂေလိဟောကြားကြားဖို့ ခွင့်ပြုခြင်းမရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ငါးယောက်လျှင် တစ်ယောက်သည် ကွန်မြူနစ်ဝါဒီကို လက်ခံသူများဖြစ်ကြသည်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ခြင်းက ခရစ်ယာန်တို့အား စစ်မှန်စေပါသည်။ သက်သေထင်ရှားပြီး၊ ဝိညာဉ်ဖမ်းဆီးသော ခရစ်ယာန်ဖြစ်စေပါသည်။ ကွန်မြူနစ်တို့၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကြောင့် လွတ်လပ်စွာတရားဟောခွင့်ရှိသော တိုင်းနိုင်ငံတို့ထက်ပင် ရှားပါး၍ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်များ ဖြစ်လာစေပါသည်။ ထိုသူတို့က လူတစ်ဦးမည်သို့ ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာသည်ကို မသိလို။ အခြားသောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်း မသိမ်းသွင်းလိုကြပေ။” (Wurmbrand, ibid., pp. 116,117).
ထိုသို့ဖြစ်ပါစေဍ အာမင်ဍ သင်သည် ခရစ်တော်သခင်ထံ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တိုးဝင်းချည်းကပ်ပြီး သခင့်အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ဍ သင်မကြာမှီ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ သင်မကြာမှီ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ “ငါ့ကိုရှာသောအခါ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့်ရှာလျှင် တွေ့ကြလိမ့်မည်” ဟူသော ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ် ကျမ်းစာတော်ကို အောက်မေ့သတိရစေလိုပါသည်။ (ယေရမိ ၂၉း၁၃)။ နောက်တစ်ပါတ် တနင်္ဂနွေဘုရားကျောင်းသို့ အရောက်လှမ်းလာခဲ့ပါဍ ယနေ့ည ၆း၃၀ မိနစ်၌ ညစာအတူသုံးဆောင်ဖို့ အဘယ့်ကြောင်င့မလာနိုင်ရမှာလဲဍ ကြွလှမ်းလာခဲ့ပါအုံး။ ဘုရားသခင် ကောင်းကြီး သွန်းလောင်းပါစေဍ အာမင်။ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် သင်တို့၏ သီချင်းစာမျက်နှာ(၇)ကို ဖွင့်ထားကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ သီဆိုမသွားခင်၊ ဒေါက်တာကေကန်မှ အထူးဆုတောင်းပေးပါမည်။ (ဆုတောင်းသည်)။ ယခု အတူတကွ သီဆိုကြပါစို့ဍ
၃။	ကြိုးစားခြင်းဖြင့် အမှုဆောင်ကြစို့
၄။	ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း
တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်ဖ်မှ (၁၉၀၈- ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ စတောက်ဟမ်ဘလင်သီကုံးရေးသားသော “အဘယ်မျှကြီးမြတ်ဘုရား” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။